Hit Item ၁၂မျိုးနှင့်အထက်ကိုအကြီးအကျယ် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်‌ပေးနေတဲ့ Tony Moly – YANGON STYLE
Hit Item ၁၂မျိုးနှင့်အထက်ကိုအကြီးအကျယ် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်‌ပေးနေတဲ့ Tony Moly
မြန်မာနိုင်ငံကိုနေရာတစ်ခုအထိထိုးဖောက်၀င်ရောက်ထားတဲ့ Tony Moly ဟာ Skin Care ပစ္စည်းအကောင်းစားတွေကိုမှ ကြိုက်တဲ့လူတန်းစားတစ်ရပ်ထဲမှာ အခိုင်အမာရပ်တည်နေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ TONY MOLY ဟာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း ၁၂ခုနှင့်အထက်ကို ပရိုမိုးရှင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်ပစ္စည်းတွေကို DISCOUNT ချပေးသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ အကြမ်းဖျဉ်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအုံးနော်။
Bio Ex cell Toning peeling gel (120 ml) 26500>> 9900mmks
Whitening Care, Brightening effectတွေ ပါဝင်တဲ့ peeling gel ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်သေအညစ်အကြေးများနဲ့ အသားကြမ်းနေတာတွေကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို စိုပြည်ချောမွတ် ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။
၁ပတ် ၂ကြိမ်ခန့် အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
shea butter Face and Body Cream (250ml) – 9900Ks
သူကတော့ မျက်နှာရော Bodyပါ သုံးလို့ရလို့ ၁ဗူးထဲနဲ့ အပြီးပဲပေါ့။ အသားအရေကို အစိုဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးတဲ့နေရာမှာ အရမ်း အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ Shea Butterနဲ့ လုပ်ထားလို့ လိမ်းပြီးသွားရင် အသားလေးကစိုပြီး ချောအိသွားတာပဲ!! အစိုဓာတ်ကိုလဲ တာရှည် ထိန်းထားပေးတယ်!! ပြီးတော့ လုံးဝ စေးကပ်မှုမရှိပါဘူး။ အနံ့လေးကလည်း shea butterနံ့ သင်းသင်းလေးမို့လို့ စိတ်ကို နွေးထွေးသွားစေပါတယ်။Sensitive skinတွေလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ Body သုံးမယ်ဆိုရင်​တော့ All skin type သုံးလို့ရပါပြီး မျက်နှာအတွက်ဆိုရင်​​​တော့ အသား​ခြောက်သူများအတွက် အဆင်​ပြေပါတယ်။
Green Vita C Skin Care Line 25500>> 14500Ks
Vitamin​တွေ အပြည့်အဝ ပါဝင်တဲ့ Real Active Brightening & Whitening Care ကတော့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပရိုမိုးရှင်းပေးထားပါတယ်။ သူ့မှာဆိုရင်တော့ အသားအ​ရေကို ကြည်လင်​တောက်ပလာ​စေမယ့်အပြင် ​ရေဓါတ် energyကိုပါ ဖြည့်​တင်းပေးတဲ့ Moisture boosting effect နဲ့
အသားအ​ရေကို ​အေးမြ အနားယူ​စေတဲ့ Soothing effect~ညိုညစ်​နေတဲ့ အသားအ​ရေကို ကြည်လင်​တောက်ပလာ​စေပြီး စိုပြည်​ချော​မွေ့​စေပါတယ်။ အဆီပြန်ခြင်း မဖြစ်​စေပါ။ All skin type ဖြစ်လို့ အသားအ​ရေတိုင်း သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဆယ်​ကျော်သက်က​နေ အသက်၃၀​ ဝန်းကျင် လူငယ်​ပိုင်း​တွေ အတွက် ပိုသင့်​တော်ပါတယ်။ အသားအ​ရေ ကြည်လင် ​တောက်ပ​ချင်သူ​တွေ အတွက် သင့်​တော်ပါတယ်။
Tomatox Magic Massage Pack – ၁ထုပ် ၅၀၀ ကျပ်
သားအရေ ညိုညစ်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်သေအညစ်အကြေးတွေ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး antioxidant​ကောင်းတဲ့~အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေတဲ့ Lycopeneနဲ့ ပုလဲသွင်း​ပေးတဲ့ Pearl Ingredients တွေက အသားအရေကို ချက်ချင်း ကြည်လင်တောက်ပသွားစေပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ မျက်နှာသစ်ပြီးခြောက်သွေ့သန့်စင်နေတဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို(မျက်ဝန်းတဝိုက်နဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ချန်ပြီး) Tomatox creamလေးကိုယူပြီး မထူမပါးလေး လိမ်းပေးပါ။ စက်ဝိုင်းပုံ massage လုပ်ရင်း ၁~၂မိနစ်ခန့် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးနောက် ၁၀မိနစ်~၁၅မိနစ်ခန့် ခဏထားပြီး (ဆပ်ပြာမပါဘဲ) ရေနဲ့ပဲ ပြန်ဆေးချပေးပါ။ ၁ပတ်ကို ၂ကြိမ်~၃ကြိမ်ခန့် သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပေါင်းတင်ပြီး အပေါ်က ကိုယ်လိမ်းနေကျ skin careတွေ လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ပေါင်းမတင်ခင် peeling gelလေးနဲ့ ချေးချွတ်ပြီး ပေါင်းတင်ပေးပါကလည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ ၈၀ဂရမ်ပါရှိတဲ့ ဘူးကြီးတစ်ဘူးကတော့ ၁၉၅၀၀ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
AKO PORE BUBBLE PORE PACK 21500Ks > 12000Ks
အဆီအညစ်အကြေးတွေကို စုပ်ယူမှုအားကောင်းတဲ့ သဘာဝ ရွှံ့ဆေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ oxygen bubble maskနဲ့ ၅မိနစ် ပေါင်းတင်လိုက်တာနဲ့ ချွေးပေါက်လေးတွေအားလုံး so clean ပဲပေါ့… အဆီပြန်လို့ စိတ်ညစ်နေသူတွေ အဆီပြန်တာ သိသိသာသာ ထိန်းပေးပါတယ်~ ကျယ်နေတဲ့ ချွေးပေါက်လေးတွေကိုလည်း ထိန်းညှိ​ပေးပါတယ်။
မျက်ဝန်းတဝိုက်ကို ချန်ပြီး သန့်စင်တဲ့ မျက်နှာ​ပေါ်ကို မထူမပါး​လေး ဖြန့်လိမ်းထား​ပေးပါ.. bubble ​လေး​တွေ ထလာပါလိမ့်မယ်.. ၅မိနစ်ထားပြီး ​ရေပြန်​ဆေးပေးပါ.. (တမျက်နှာလုံး (သို့) အဆီပြန်တဲ့ ​နေရာကို သုံး​ပေးနိုင်ပါတယ်) ၁ပတ် ၁~၂ကြိမ် အသုံးပြု​ပေးနိုင်ပါတယ်။
Fragrance Garden Body Line 28500 > 19500Ks
​တစ်​နေ့ကုန် ဆွဲ​ဆောင်မှုရှိပြီးမွေးပျံ့တဲ့ Body​ ရနံ့​လေး ဖြစ်ဖို့ ပြင်သစ် ​ရေ​​မွှေးနံ့ ပါဝင်တဲ့ Body Essence နဲ့ Body lotion လေးပါပဲ။ အမျိုးအစား ၂မျိုးပါရှိပါတယ်။
Fragrance Garden Versailles Rose Body Essence (300g)
[Essence type] [Fruity Floral အနံ့][Damask Rose ingredients]
Fragrance Garden British Vanilla Body lotion(300g)
[Lotion type] [Floral Musk အနံ့]
[Shea butter ingredients]
Intense Care Gold 24K Snail Sun Cream ကတော့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ Discount ချထားပါတယ်။
[ SPF 50+, PA++++][Whitening, Anti-wrinkle, Nutrition] (50ml)
Price: 36500ကျပ်မှ 19900ကျပ်သာ ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
UV Master Aqua Sun Gel [SPF 50+, PA+++] (50ml) ကတော့ 26500 ကျပ်မှ 18500ကျပ်သာကျသင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Watery gel type ပုံစံ ဖြစ်တာ​ကြောင့် စိမ့်ဝင်တာ မြန်ပြီး စေးကပ်ခြင်းလည်း လုံးဝမရှိ​စေဘဲ အဆီပြန်ခြင်းလည်း မရှိ​​စေပါဘူး​နော်~
UV MasterUV Master Perfecting Sun Block [SPF 50+, PA+++] [For All skin type](50ml)
ကတော့ 26500 မှ 18500ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာဆိုရင်တော့ Vitamin A, C ,E ,F ပါဝင်ခြင်း ၊ Moisture Soothing Complex ပါဝင်ခြင်း, Water lily extract ပါဝင်လို့ အသားအ​ရေကို ​အေးမြ အနားယူ​စေပါတယ်။
Perfecting Sun Block[SPF 50+, PA+++] [For All skin type](50ml) ကလည်း 26500 ကျပ်မှ 18500ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Vitamin A, C ,E ,F ပါဝင်ခြင်း၊ Moisture Soothing Complex ပါဝင်ခြင်း နဲ့ Water lily extract ပါဝင်လို့ အသားအ​ရေကို ​အေးမြ အနားယူ​စေပါတယ်။
TONYMOLY[Dual effect Sleeping Pack] ကတော့ 19500Ks သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့
ပေါင်းတင်ဖို့အတွက် သီးသန့် အချိန်မပေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Dual effect sleeping packလေးက မရှှိမဖြစ်ပါပဲ။ ညဘက်လိမ်းပြီး တန်းအိပ်လိက်ရုံပါပဲ။ ရေပြန်ဆေးချစရာ မလိုတဲ့ pack လေးဖြစ်ပါတယ်။
Mask Sheet အားလုံးကတော့ ၂ချပ်၀ယ်တစ်ချပ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Byu2 Get1 Promotion လေးပါပဲ။ Skin Care အပြင် ထူးထူးခြားခြား နှုတ်ခမ်းနီလေးကလည်း Promotion ထဲမှာပါ၀င်လာပါတယ်။
So Juicy Tint Water – 8500Ks > 4500Ks
Velvet Oh my lips – 8500Ks > 4500Ks
Lipone get it tint – 12500 > 8500Ks အသီးသီးကျသင့်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ ဇူလိုင်၄ရက်အထိဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ Tony Moly Myanmar Facebook Page မှာ သွားရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းမိုက်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့် သင်တို့အနေနဲ့ လုံး၀လက်မလွှတ်သင့်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။